RWENDO RWOKUTSVAGA EGT -Cofttek
musha > RWENDO RWOKUONGORORA ZUVA
YEMAHARA RADICAL CHIDZIDZO
Kazhinji muviri metabolism
Heavy simbi kusvibiswa
MAHARA RADICALS & ZVIRWERE
Kazhinji, mahara radicals anodikanwa kumitumbi, asi yakanyanyisa yemahara radicals inogona kukonzera kusaenzana kweiyo muviri kushanda, zvobva zvaendesa kune oxidative kusagadzikana kuchichinjika muzvirwere zvakasiyana siyana (zvinyorwa zvinoratidza kuti mahara radicals ndiwo manyuko ezvirwere zvakasiyana siyana).
Miviri yedu haigone kushanda isina oxygen, uye kana huwandu hwakawanda hwemahara radicals hwakawedzera, muviri uri pasi peiyo oxidative kushushikana unozokonzeresa iyo yekugadzirisa system kutadza mukubvisa yakawandisa emahara radicals. Muzviitiko zvakakosha, muviri unoda kuzadza antioxidants in vitro kubvisa zvakanyanyisa mahara radicals.
KUKUDZIRIDZWA KWEMAZWIZO ANODZIDZA
L-ERGOTHIONEINE - RUDZIDZO Rutsva RWEZVINHU ZVINOGONESESA
EGT iri yechisiki chiral amino-acid antioxidant biosynthesized mune mamwe mabhakitiriya uye fungi. Iyo yakakosha bioactive komputa iyo yanga ichishandiswa seyakanyanya scavenger, iyo ultraviolet ray firita, mutongi weiyo oxidation-yekudzora maitiro uye maseru bioenergetics, uye yehupenyu cytoprotector, nezvimwe.
L-Ergothioneine (EGT, ERGO, CAS: 497-30-3), inozivikanwawo se (S) -pi-Carboxy-2,3-dihydro-N, N, N-trimethyl-2-thioxo-1H-imidazole- 4-ethanaminium yemukati munyu, yakatanga yakabviswa kubva ergot naTanret C muna 1909, ipapo yakawanikwawo muropa remhuka. Yakachena EGT yakachena kristaro, inonyungudirwa mumvura, (yakanyungudika 0.9mol / L pamhepo tembiricha). Autoxidation haigone kuitika pahupi pH kukosha kana mune yakasimba alkaline mhinduro. EGT inogona kuvapo mune maviri ma isomer mafomu - thiol fomu uye thione fomu, sezvakaratidzwa pasi apa:
Nebatsiro remazhinji-mabasa, EGT inomira pakati pemamwe akawanda antioxidants.
Iine mabhenefiti eakawanda-mabasa, EGT inomira pakati pezvimwe zvakawanda antioxidantsMakomborero (achienzaniswa ne glutathione, cysteine ​​nezvimwewo):
----EGT zviri nyore kuunganidza mumasero uye iko kusungwa kunodzikama kupfuura mamwe antioxidants.
——EGT inonyanya kushanda pakudzora kufa kwemuviri kunokonzerwa nepyrogallol.
--—EGT inonyanya kutsvaira ROS kudzivirira oxidation, nepo glutathione nevamwe vachitsvaga radicals yemahara, ndokuti, zvimwe antioxidants scavenge oxidation zvigadzirwa.(1) Oleoylethanolamide (oea) - iwo mashiripiti wand ehupenyu hwako
KUFANANA KWEMWE ANTIOXIDATION
Results: EGT ndiye ainyanya kutsvagisa rusununguko radicals kana ichienzaniswa neyekare antioxidants seGSH, uric acid uye trolox. Kunyanya, iyo yepamusoro antioxidant kugona inoratidzwa neEGT vs.poxyl radicals kwakakonzera 25% kukwira kupfuura kukosha kunowanikwa nereferensi antioxidant trolox. Iko kugona kwekutsvaira kweEGT kuenda kuhydroxyl radicals yaive 60% yakakwira, zvichienzaniswa neuric acid, inomiririra chirevo antioxidant vs. hydroxyl radicals. Chekupedzisira, EGT yakaratidza yakanyanya antioxidant chiitiko zvakare kune peroxynitrite, ine simba rekutsvaira 10% yakakwira kupfuura iyo yeuric acid.
EGT inewo maitiro ekugadzirisa intracellular simba,
kuvandudza huwandu hwekupona kwemurume,
kuchengetedza chiropa kubva mukukuvara,
kukura kwehurema uye katsi.
G ZIGI YAKAWANIKWA ZVAKAWANDA MUZVIMBO NEZVIMHUKA
5-10mg pauniti yemunhu mukuru uye zvikamu zviviri kusvika ku2 zvinoramba zvichikosha mukudya kwako kwezuva nezuva.
Kwayaka: Li Yiqun, Zhou Nianbo. Biology Mashandiro uye Kunyorera kweEGT [J]. Chikafu Injiniya, 2010 chuma9 （3） ： 26-28.
Intakes zvakanyorwa seinotevera:
Vana (makore 3-11) ≤l 0 mg / zuva
Vechidiki (makore 11-21） ≤30 mg / zuva
Vakuru (makore 21-80) ≤30 mg / zuva
Tarira: 1. Madosi evana nevakuru （3 -80 makore old
Kushandisa vakadzi vane nhumbu kana vanoyamwisa hakukurudzirwe.
Dhata sosi: Tetrahedron paunenge uchinyorera US NDI
Dhata dzinoratidza: 10.5mg / g yeOXIS's ADI (Inogamuchirwa Yezuva Nezuva).
KUZIVISA & KUSHANDISA
Parizvino, pane nzira nhatu dzekugadzira EGT: kemikari synthesis, dzinongoitika bio-kuburitsa (kunyanya kubva kune howa, mhuka dzeminyama uye kubviswa kweropa), uye biosynthesis nzira.
Kufananidza kweEGT Kubvisa nzira
- EGT ine yakafara mashandisirwo muzvizoro, chikafu chinoshanda, mishonga, mishonga, biomedicine, zvichingodaro.
(3) ZVIMWE ZVINOGONESESWA
Oleoylethanolamide (oea) -iye mashiripiti wand ehupenyu hwako
Anandamide vs cbd: ndeipi iri nani kune hutano hwako? Zvese zvaunoda kuti uzive nezvavo!
Zvese zvaunoda kuti uzive nezve nicotinamide riboside chloride
Magnesium l-threonate inowedzera: mabhenefiti, muyero, uye mhedzisiro
Palmitoylethanolamide (pea): mabhenefiti, muyero, mashandisiro, kuwedzera
Wepamusoro 6 hutano hunobatsira hwe resveratrol zvinowedzera
Wepamusoro 5 mabhenefiti ekutora phosphatidylserine (ps)
Wepamusoro 5 mabhenefiti ekutora pyrroloquinoline quinone (pqq)
Iyo yakanakisa nootropic yekuwedzera yealpha gpc
Yakanakisa anti-kuchembera chinowedzera chenicotinamide mononucleotide (nmn
1.FERE RADICAL CHIDZIDZO
2.FREE RADICALS & ZVIRWERE
4.L-ERGOTHIONEINE - RUDZIDZO Rutsva RWEMAZWI ANOTIZOIDHIDHI
9.KUENDESA & KUSHANDISA